Koa satria niaritra ny nofo Kristy, dia aoka mba ho fiadiana ho antsika koa izany – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 février 15, 2013 Laisser un commentaire sur Koa satria niaritra ny nofo Kristy, dia aoka mba ho fiadiana ho antsika koa izany
« Ary Jesosy dia nentin’ny Fanahy nankany an’efitra, mba halain’ny devoly fanahy. Ary nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina Izy, koa nony afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpaka-fanahy ka nanao taminy hoe: Raha Zanak’Andriamanitra Hianao, dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: voasoratra hoe: « Tsy mofo ihany no iveloman’ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. » Ary ny devoly nitondra Azy nankany amin’ny tanàna masina ka nampitoetra Azy teo an-tampon’ny tempoly, dia nanao taminy hoe: « Raha Zanak’ Andriamanitra Hianao, miajerà any ambany any: fa voasoratra hoe: « Izy handidy ny anjeliny ny aminao; ary eny an-tànany no itondran’ireo Anao, fandrao ho tafintohina amin’ny vato ny tongotrao ». Hoy Jesosy taminy: Voasoratra hoe koa: »Aza maka fanahy an’i Jehovah Andriamanitrao ». Ary ny devoly nitondra Azy indray nankany an-tendrom-bohitra avo dia avo ka naneho Azy ny fanjakana rehetra amin’izao tontolo izao mbamin’ny voninahiny, dia nanao taminy hoe: Izao rehetra izao dia omeko Anao raha miankohoka eto anatrehako Hianao. Fa hoy Jesosy taminy: Mandehena hianao, ry Satana: fa voasoratra hoe: « Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao. « Dia nandao Azy ny devoly, ary indreo, nisy anjely tonga ka nanompo Azy. » Matio 4:1-11
Ho fanefen’Andriamanitra an’i Jesosy amin’ny asa lehibe tsy maintsy ho tanterahany dia tsy maintsy niaritra ny fakan’ny devoly fanahy Azy ny Tompo. Koa satria niaritra tamin’ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany; fa izay niaritra tamin’ny nofo dia efa afaka amin’ny ota; mba tsy andanianareo ny andro sisa hiainanareo amin’ny nofo araka ny filan’ny ota intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra. Koa satria nofo Jesosy dia tena nihatra taminy ny hirifirin’ny nofo: niharan’ny hanoanana vokatry ny fifadiana nandritra ny efa-polo andro sy efa-polo alina. Ny Fanahy mihitsy no nitondra Azy tany an’efitra, ary voalaza fa mba halain’ny devoly fanahy. Toa mapieritreritra tokoa izao manjo an’i Jesosy izao, hoe Andriamanitra mihitsy, ny Fanahy mihitsy no mampianatra Azy hisedra zavatra sarotra toy izao, ka toy ireny mpifaninana amin’ireny taranja ara-panatanjahantena ireny asaina miharitra ny zavatra mafy isan-karazany. Nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina, ka noana.
Asa isika raha efa mba niharan’ny tsy nihinan-kanina roa andro, telo, efatra, eny, mety ho herinandro angamba, fa ny an’ny Tompo eto dia efa ho iray volana sy folo andro. Mety ho mieritreritra isika hoe: Izy Andriamanitra ka! Eny tena Andriamanitra Izy, nefa voalaza eto fa noana Izy, ary tao anatin’izany hanoanana izany dia tonga ny mpaka fanahy.
Raha izao zava-misy eto izao no dinihina dia eo amin’ny fahalemen’ny nofon’ny olona indrindra no tonga ny mpaka fanahy, ary eto moa dia ny hanoanana no mamely. Ny Teny Soratra Masina mikasika izany moa dia izay voalazan’ny Tompo hoe: Tsy mofo ihany no iveloman’ny fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. Ny Teny dia tena misy lanjany eo amin’ny anto-pijoroan’ny Fiangonana Kristiana, ary io no fiasam-pahasoavana fototra ampiasain’Andriamanitra hitondrana fahasoavana ho an’ny olony. Amin’ny Batisa dia rano ihany ny rano fa ny Tenin’Andriamanitra miombona amin’ny rano no itondran’Andriamanitra ny fahasoavana ho an’izay atao batisa. Toa izany koa ny mofo na ny divay, ny mofo dia mofo ihany, toa ny mofo eny amin’ny mpivarotra ihany, fa ny Teny miombona amin’ny mofo no mahatonga ny fitondrana fahasoavana ho an’izay mihinana azy; toa izany koa ny divay, ny Teny miombona amin’ny divay no maha tonga azy mitondra fahasoavana ho an’izay misotro azy. Sarobidy tokoa ny asan’ny Teny. Ny ambara eto dia manamafy ny herin’ny Teny, fa dia mahasolo ny asan’ny mofo ny Teny: mety mahavelona ny mofo, fa araka izay ambara eto dia ny Teny rehetra aloaky ny vavan’Andriamanitra dia mitondra fahavelomana ho an’ny olona.
Mahafinaritra ery ny mamaky ny teny ao amin’ Ezekiela 3:1-3 manao hoe: « Ry zanak’olona, hano izay hitanao, eny, hano ity horonantaratasy ity, dia mandehana, ka mitenena amin’ny taranak’Isiraely. Dia nosokafako ny vavako, ary nafahany ahy izany horonan-taratasy izany. Ary hoy Izy tamiko: Ry zanak’olona, vokiso ny kibonao, ary fenoy ity horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao. Dia nihinana aho, ka mamy tao ambavako toy ny tantely izy. Tsy misy horonan-taratasy any amin’y efitra nisy an’i Jesosy fa ny teny izay naloaky ny vavan’Andriamanitra voatahiry tao am-pon’ny Tompo no resahany eto. Ny tsinay ambara eto dia ny fontsika olombelona mitsakotsako ny tenin’Andriamanitra: « Ny lalàn’i Jehovah no sitrany, eny, ny lalàny no saintsaininy andro aman-alina » (Salamo 1:2). Mitondra fahavelomana ho an’ny olona ny fisaintsainana andro aman-alina ny teny naloaky ny vavan’Andriamanitra. Hoy ny ao amin’ny Ezekiela, mamy ao ambavako toy ny tantely ilay horonan-taratasy. Raha miaina tsara ny tenin’Andriamanitra ny olona dia tonga mamy aminy toy ny tantely izany teny izany!
Tsy hanova ny vato ho tonga mofo ihany anefa no nakana fanahy ny Tompo Jesosy, fa ny hitsapa ny finoana ao anatin’ny tena ka haka fanahy an’Andriamanitra amin’ny zavatra maro samihafa, nefa dia fakana fanahy amin’ny zavatra tsy mahasoa tsy mahasoa akory, ny eto dia ny hoe: mianjerà any ambany any. Ny nitondran’ny mpaka fanahy an’i Jesosy eto dia voalaza fa eny amin’ny tampon’ny tempoly ao amin’ny tanàna masina, ary toa mahalasa eritreritra izany ny amin’ny teny hoe: Izay manao azy ho efa mijoro tsara aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Asan’ny Fanahy Masina ny manamasina antsika, nefa isika indray no tarihin’i Satana hianjera amin’ny fahotana isan-karazany. Hoy ny Tonpo, fa voasoratra hoe: Aza maka fanahy an’i Jehovah Andriamanitrao. Tsy fakana fanahy an’Andriamanitra ihany sy fiahiany tafahoatra ny nofontsika ihany anefa no hitarihin’i Satana antsika fa ny amin’ny fitiavam-boninahitra koa. Efa fiadiana nampiasain’i Satana hamitahana ny olona hatrany am-boalohany io fitiavam-boninahitra io tamin’ny alalan’ilay menarana, ka mahatonga ny olona hiankohoka eo anatrehany. Raha miankohaka eo anatrehako hianao dia homeko anao izao rehetra izao! Fitaka ihany anefa ny an’ny Satana fa iza moa no namorona izao rehetra izao? Tena mazava tokoa ho an’ny olon’Andriamanitra ny namoronan’Andriamanitra izao rehetra izao, nefa dia sahy ihany Satana mamitaka ny olona, ary dia ao ihany izay voafitaka!
Fa voasoratra hoe: Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao! Rehefa voasetrin’ny tenin’Andriamanitra hatrany Satana dia voalaza fa nandao an’i Jesosy i Satana, ny devoly, ary dia lasa ny anjely no nanompo ny Tompo Jesosy. « Koa satria niaritra tamin’ny nofo Kristy, dia aoka mba ho fiandiantsika koa izany saina izany. Mba tsy handaniantsika ny andro sisa hiainantsika amin’ny nofo araka ny filà’ny olona intsony » (I Pet. 4:1-2).
Aoka ary isika hifikitra mafy amin’ny Tenin’Andriamanitra!
Publié parfilazantsaramada février 15, 2013 Publié dansUncategorized